OEM caddeynta iyo qoyaanka Body Care Lotion Moisturizer Cosmetics OEM & ODM
OEM caddeynta iyo qoyaanka Looshin Career Moisturizer
[Waxyaabaha saafiga ah] 150 ml
Biyaha, Glycerinum, Soosaarida Chamomile, Betaine, Aloe Extract, Jojoba Oil
Dayactirka, qoyaanka, iyo soo nooleynta maqaarka, gabowga iyo kor u qaadista dabacsanaanta.
Waxaa lagu sameeyaa waxyaabaha dabiiciga ah ee dhirta ku saleysan oo ay ka mid yihiin soosaarida chamomile, soosaarka aloe, iyo saliidda jojoba.
Qaaciddada aan xasaasiyadda lahayn ayaa aad ugu jilicsan maqaarka.
Saliida gaarka ah ee 100% jojoba oil waxay iskujirtaa si ay uga caawiso kobcinta iyo taageerida maqaarka ilmaha.
Maya: Parabens, sulfates, phthalates, saliida macdanta, petrolatum, udgoonada macmalka ah ama dheehyada.
Daryeelka aasaasiga ah ee maqaarka ka dib, si tartiib ah ugu duug maqaarkaaga dhaqdhaqaaqyo wareegsan kor ilaa aad si buuxda u nuugayso.